Vaovao Mafana · Aogositra, 2011 · Global Voices teny Malagasy
Vaovao Mafana · Aogositra, 2011
Tantara mikasika ny Vaovao Mafana tamin'ny Aogositra, 2011
Tenifototra iray amin'ny teny Saodiana manao hoe #tal3mrak izay raha adika ara-bakiteny dia manao hoe "Andriamanitra anie hanome tombon'andro anao" na "ny andriamanjaka" raha atao amin'ny teny Tandrefana no nandrakotra ny Twitter androany (28 Aogositra 2011). Zava-tsy nampoizina ho an'ny maro ilay tenifototra, izay tsy nihevitra velively fa ny Saodiana...
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana28 Aogositra 2011
Ny vaovao avy any Libia dia miparitaka erak'izao tontolo izao, noho ny nahazoan'ireo mpihoko tsikelikely ny tanàna. Ny vaovao lehibe iray nalaza, dia ny fitsoahan' ny olo-maventy faharoan'i Libia teo aloha, Abdessalem Jalloud nankany Italia tamin'ny fiaramanidin'ny zotram-pitateran'i Malta nandalo tany Tonizia, araka ny nambaran'ny olona ambony iray ao amin'ny...
Eoropa Andrefana22 Aogositra 2011
Ny fitsidihana vao haingana nataon'ny Papa Benedicto XVI tao Espana dia niteraka fanaovana "Diabe Laika" iray ho fanoherana ny fampiasàna ny volam-bahoaka amin'ny resaka fivavahana ao anaty fanjakana laika. Ny fifandonana teo amin'ireo laika sy ireo olom-pinoana dia niafara tamin'ny famoretana an-kerisetra nataon'ny polisy tamin'ireo mpanao gazety nitatitra ny zava-nitranga....
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana22 Aogositra 2011
Nihetsika mangataka fanavaozana ny rafi-pampianarana ireo Shiliana mpianatra nanomboka tamin'ny Aprily. Anaty lahatsary tsy ela akory izay, azo atao ny mahita tranga tanaty fihetsiketsehana iray, ka nandritra izany dia nifampiraharaha ry zareo ka nahavita nandresy lahatra andian-jiolahim-boto nisaron-tava handao ny toerana. Maneho ny fanohanan-dry zareo ny mpianatra ireo Shiliana any...